Typesdị 5 nke SEM maka mkpọsa eCommerce | ECommerce ozi ọma
SEM bu acronym nke Ngini Ngini Ngini. Ruo n'ókè na mgbe anyị na-ekwu maka SEM anyị na-ezokarị aka na mgbasa ozi mgbasa ozi akwụ ụgwọ na engines ọchụchọ ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu, SEM na-ezo aka n'ahịa ahịa ọ bụla n'ime engines ọchụchọ, ma akwụ ụgwọ ma ọ bụ na akwụghị. N'ọnọdụ ọ bụla, ha na-arụ ọrụ dị ka ngwa ọrụ dị ike iji mepụta otu n'ime ọtụtụ mkpọsa ọhụụ site ugbu a gaa n'ihu.
Nke a bụ mkpa iji mejuputa atụmatụ a na ahịa dijitalụ iji mee ka a mata otu onyinye ya kachasị mkpa. Maka na, echefula na SEM bụ iji ngwa ọrụ na atumatu na-enyere anyị aka ịkwalite ọhụhụ na ịbawanye nnweta saịtị na ibe weebụ maka ngwa nyocha.
Ga-enwe ike inyocha na ịnwere ike inweta ọtụtụ elele na ụdị arụmọrụ a na ụdị okike dị iche iche. Dị ka ihe atụ, ruru ka nkwado mgbasa ozi na engines ọchụchọ (Google AdWords, Mgbasa ozi Bing ma ọ bụ Yahoo! Marketingzụ ahịa) a na-emepụta okporo ụzọ dị mma na weebụ. Site na ebe ị nwere ike ịzụlite mkpọsa nke njirimara ndị a pụrụ iche site ugbu a gawa.
1 Sem mkpọsa: kedu ihe ị ga-enweta?
2 Mee omume bara uru
3 Tụle isiokwu
4 Mụta otu-esi ebuli gị AdWords mkpọsa
5 Ntughari ahia
6 Gbaa mkpọsa vidiyo
Sem mkpọsa: kedu ihe ị ga-enweta?
N'ezie, nke a bụ otu ebumnuche nke ọtụtụ n'ime ndị na-ahụ maka ụlọ ahịa ma ọ bụ azụmaahịa dị n'ịntanetị setịpụrụ onwe ha. N'ihi na ọ nwere ike inyere ha aka imezu ebumnuche ha n'oge dị mkpirikpi karịa site na usoro ndị ọzọ dị iche iche, usoro ma ọ bụ ọdịnala. Yabụ na n'ụzọ dị otu a, ị nọ n'ọnọdụ zuru oke iji mezuo ụfọdụ n'ime ọchịchọ ndị a na anyị ga-ekpughere gị n'okpuru:
N'ọnọdụ niile, ọ na-enye ohere iji ngwa ngwa kpọsaa ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ nwere ikike dị ukwuu na mgbasa ya. N'ime ihe ndị ọzọ, n'ihi na a ga-enweta ya, ọ ga-adọta ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ọrụ ma ọ bụ ndị ahịa.
Ọ na - enye gị ohere ịsọ mpi n’etiti ndị gị na ndị ọzọ ga - eji otu asọmpi zọọ ahịa.
Site na echiche akụ na ụba, enwere obi abụọ na ịlaghachi na itinye ego na ngwa ngwa karịa site na usoro mmepe ndị ọzọ. Ma ọ bụrụhaala na mkpọsa na njirimara ndị a na-kachasị kachasị mma site na mmalite na na njedebe nke ụbọchị ihe metụtara ikpe ndị a pụrụ iche.
N'ikpeazụ, ọ bụ ohere dị ukwuu iji weta okporo ụzọ dịpụrụ adịpụ na weebụsaịtị nke ụlọ ahịa anyị ma ọ bụ azụmahịa dijitalụ.
Mee omume bara uru
N'ọnọdụ ọ bụla, anyị enweghị ike ichefu n'oge a na ụdị usoro a anyị na-ekwu maka ya gụnyere itinye aka na nyocha dị ka isiokwu ọchụchọ, ịmepụta mgbasa ozi na njikwa ọnụahịa. Nke a bụ ihe na-ezo aka n'omume dijitalụ nke ọma mara nke ọma dịka na PPC (Payaa Kwa Pịa) na CPC (Ọnụ Ahịa Pịa).
N'ihi na n'ime ụdị SEM mkpọsa maka eCommerce ha na-enweta ihe bụ monetization nke weebụsaịtị nke ụlọ ọrụ gị, ụlọ ahịa ma ọ bụ azụmahịa n'ịntanetị. Ruo n'ókè na ọ nwere ike ịghọ isi iyi nke ego maka ọrụ ọkachamara gị. Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ọ bụghị obere nnukwu ego. Ọ bụrụ na ọ bụghị, na Kama nke ahụ, iji megharịa ụfọdụ mmefu ndị ọzọ na azụmahịa kọmputa. Kedu ụzọ ọ bụla, ọ nwere ike bụrụ nkwado bara uru ma ọ bụrụ na ịmara otu esi etinye ya n'ọrụ n'ụzọ ziri ezi site ugbu a gawa.
Site na atụmatụ a akọwapụtara n'ahịa nke oge a enwere ike ikwu na-enweghị atụ ụjọ na ị ga-ezighi ezi na n'ihi ihe niile dị n'elu, ha nwere ike ịga ịhazi ederede nke ahụ ga-aga nke ọma na atụmatụ SEM n'aka. Nhọrọ nke usoro ndị a ga-ekpebi mgbe a ga-egosi mgbasa ozi ahụ, yabụ ị gaghị ewepụta oge iji họrọ ha ma ọ bụ guzosie egwuregwu ndị a ga-etinye na ha.
N'akụkụ aka nke ọzọ, ibe weebụ ọ ga-abụ ebe njedebe nke ndị ọrụ pịrị na mgbasa ozi, yabụ na o tozuru oke nyocha. Ọ bụrụ na mgbasa ozi dị na mgbasa ozi SEM anyị na-akpọrọ ndị ọrụ gaa na weebụsaịtị nke anaghị ekwupụta ntụkwasị obi, enweghị ọsọ ọsọ zuru oke, ma ọ bụ enweghị ederede siri ike nke na-agba ume ntụgharị, atụmatụ a nke azụmaahịa ọchụchọ.
Mụta otu-esi ebuli gị AdWords mkpọsa
Ọ bụ ezie na kachasị njikarịcha kachasị ga-eme mgbe ọnụọgụ data nke data dị, enwere omume ndị ọzọ enwere ike ịme kwa ụbọchị.
Dịka ọmụmaatụ, na mmalite SEM mkpọsa, a na-atụ aro ka ị nyochaa okwu ọchụchọ nke kpatara mgbasa ozi. N'agbanyeghị eziokwu na gara aga Keyword Research nyere anyị ọtụtụ clues ịzụlite a ndepụta nke na-adịghị mma okwu, otu mgbe ike zoro ezo na. Nyochaa nke a ma na-eme okwu ndị anyị na-enweghị mmasị na ya agaghị emebi mmefu na clicks na-adịghị mkpa maka ụlọ ọrụ na-eme mkpọsa SEM.
Usoro a pụrụ iche ga - enyere gị aka iru ụfọdụ ebumnuche gị kachasị mkpa. N'ime ndị na-apụta ìhè na ndị na-esonụ na anyị na-tụọ n'okpuru:
Ọ ga - enyere gị aka ịma asọmpi site na oge a ma ha bụ ụdị mgbochi ọ bụla.
Ahịa: Ọ bụrụ na ebumnuche gị bụ ịkwọ ụgbọala n'ịntanetị, na ngwa, ekwentị ma ọ bụ n'ụlọ ahịa.
Ohere ahịa: Ebumnuche zuru oke iji gbaa ndị ahịa ume ime ihe iji mepụta ndu na ntụgharị ndị ọzọ.
Trafficzọ okporo ụzọ weebụ: Ebumnuche a bụ nke ị ga-aka akara ma ọ bụrụ na ebumnuche gị bụ ịnweta ndị ọrụ ziri ezi ileta weebụsaịtị gị.
Dị ka ị hụworo, ọ ga-enye gị ohere dị ukwuu ịmalite mkpọsa dị irè nke na-enyere gị aka ịnweta nbudata nke ngwa gị ma mee ka ndị ọrụ nwee mmekọrịta karịa na ya, nke a bụ ebumnobi ziri ezi.
Ebee ka ị ghaghi iburu n'uche site ugbu a na azụmaahịa ọ bụla dị iche, yabụ ọ chọrọ atụmatụ mkpọsa SEM dabara na njirimara a. Maka na enweghị usoro anwansi maka ha niile, dịka ị nwere ike iche n'oge ụfọdụ na ndụ ọkachamara gị. N'aka nke ọzọ, echefula na ọ ga - eme ka ị rute ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị ọrụ ma bulie aha ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị.
Ofdị mkpọsa a na-enye gị ohere igosi mgbasa ozi nye ndị ọrụ na-agabu na weebụsaịtị gị n'ozuzu ma ọ bụ na ngalaba akọwapụtara. Mana site na uzo ahia karia inweta site na ahia onwe ya. N'ezie, ọ bụ otu n'ime usoro kachasị ọhụrụ nke a pụrụ ịchọta n'oge ahụ na mpaghara dijitalụ ma ọ bụ nke n'ịntanetị. Maka na ọ na-enye usoro iji gbasaa elekere iji nweta ndị ahịa ma ọ bụ ndị ọrụ ọhụụ maka nzukọ gị.
N'aka nke ọzọ, enweghị ike ichefu ịghọta klas a nke mkpọsa na azụmaahịa ọgbara ọhụrụ na ntugharị na-adabara ndị mgbasa ozi ndị chọrọ ịbawanye ahịa ha site na ịmetụta ndị ahịa ha mgbe ha na-agagharị na weebụsaịtị ndị ọzọ, ma ọ bụ mgbe jiri ụfọdụ ngwa nke teknụzụ kachasị ọhụrụ. Ya mere, ịdị irè ya nwere ike ịdị ukwuu site na mmalite ya, ọ bụ ezie na ọ nweghị nsogbu ụfọdụ.
Akụkụ ọzọ nke a ga-enyocha na ntinye nke usoro a pụrụ iche bụ na n'ikpeazụ ndị ọrụ n'onwe ha ga-abụ ndị ahịa anyị. N'ịbụ, n'aka nke ọzọ, otu n'ime ebumnuche anyị kachasị site n'oge a gaa n'ihu. A sị ka e kwuwe, ọtụtụ n'ime omume anyị ka a ga-eduga na ọkwa ndị a n'ihe a mere.
Gbaa mkpọsa vidiyo
Ebumnuche vidiyo ahụ na-akwalite ma na-enye visibiliti na mgbasa ozi vidiyo gị, ọ bụghị naanị na ikpo okwu YouTube, kamakwa na Google Display Network na ndị ọzọ na-amaghị nke ọma ọtụtụ ndị ọrụ. Site n'echiche a, obi abụọ adịghị ya na ngwa ya ga-emecha nwekwuo mmasị nke ndị ọrụ maka ngwaahịa, edemede ma ọ bụ ọrụ anyị. Yabụ na n'ụzọ dị otú a akara ụghalaahịa anyị makwaara nke ọma na n'ụzọ ụfọdụ ika
I nwedịrị ike ịga maka sistemụ obere usoro maka nsonaazụ ha. Dịka ọmụmaatụ, ụdị mgbasa ozi nke onye nwere mmasị nwere ike ikpebi ma ọ ga-ahụ ya ma ọ bụ na ọ gaghị ahụ, yabụ, onye mgbasa ozi ahụ ga-akwụ ụgwọ naanị ma ọ bụrụ na ịpị. Na ihe mejupụtara nhọrọ maka ibe weebụ nke ụlọ ahịa ma ọ bụ azụmaahịa dị n'ịntanetị iji gboo mkpa ha iji dọta ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ahịa ma ọ bụ ndị ọrụ.
N'echiche a, mkpa ọ dị ịme mkpọsa vidiyo gafere karịa ihe a na-akpọ azụmaahịa ọdịnala. Ruo n'ókè na n'ikpeazụ ụdị mgbasa ozi a nwere usoro mmepụta nke nwere ike ịdị elu karịa ndị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Typesdị 5 nke SEM mkpọsa maka eCommerce